Izindaba - Indlela yokufanisa umbala we-mesh yensimbi yokuhlobisa nesitayela sonke segumbi
Ngokuthuthuka okuqhubekayo komqondo wokuhlobisa wabantu, ukuphishekela ukufanisa umbala we-mesh yensimbi yokuhlobisa nakho kuye kwandiswa. Ukuhlobisa indlu akusewona umbala okhanyayo oyisidina. Imikhiqizo ecwebezelayo yemeshi yensimbi isenza sikwazi ukuhlobisa ihhovisi ngendlela ezothile nangendlela efanele. Kodwa-ke, uma ukufanisa umbala kungalungile, kubuye kube yi-taboo yokuhlobisa. Ukuhlanganiswa akukuhle, kodwa akunawo umphumela omuhle. Kubukeka kubi kunalokho. Ake sethule amakhono okufanisa umbala wekhethini lensimbi enezikhala ngezikhathi ezahlukene!
Ukufanisa umbala we-mesh yensimbi yokuhlobisa kuthinta ngokuqondile ukucaciswa kwekamelo. Ezindaweni ezinezindawo ezinkulu ezinjengodonga, phansi kanye nosilingi, kufanelekile ukusebenzisa insimbi engagqwali ekhanyayo enemeshi yokuhlobisa kanye ne-spiral mesh yokuhlobisa njengethoni engezansi, ikakhulukazi usilingi. Uma kusetshenziswa imibala eminingi emnyama kakhulu, izonikeza abantu umuzwa wokucindezeleka nobunzima. Ungakwazi ukubeka ezinye izilenge ezincane (ezifana nezibani ezincane ezilenga phakathi nomkhosi) ophahleni. Umehluko phakathi kodonga nophahla kukhanya futhi kunamandla. Imibala efana namakhethini ensimbi kanye namakhethini e-mesh partition metal ithoni yekamelo, engakha ukufanelana okuphelele nodonga.
Umbala wegumbi lenkomfa kanye negumbi lokwamukela amakhasimende ngokuvamile unomsindo obandayo, onesizotha futhi onikeza amakhasimende umuzwa wokuhleleka, umsebenzi womsebenzi kanye nokuzibophezela. Insimbi engagqwali enombala okhanyayo enemeshi ifanele udonga, enombala ogqamile ogqamile. Inganweba ukucabanga kwabantu uma ifaniswe netafula letiye elimnyama. Imibala evame ukusetshenziswa emnyama, ikhofi, impunga ekhanyayo, umbala oyinhloko we-aluminium alloy, umbala oyinhloko wensimbi engenasici, isiliva elikhanyayo, njll.
Izindawo zokudlela ezisezingeni eliphezulu kufanele zibe nemibala efudumele noma engathathi hlangothi, futhi izindwangu zamatafula ezikhanyayo zingathuthukisa isifiso sabantu sokudla. Okuvame ukusetshenziswa kakhulu, okufana nophuzi osagolide, umbala osagolide, owolintshi, njll. izindawo zokuzijabulisa ziyizindawo ezikhululeke kakhulu kubantu. Ngokuvamile basebenzisa imibala egqamile nemibala efudumele, enikeza abantu umoya ovuthayo nowothando. Ikakhulukazi okunsomi kwamagilebhisi, igolide, ithusi, okubomvu kwesiShayina, okubomvu kwe-mahogany, njll. Ihhovisi lomthengisi likhanya kakhulu ngombala ofudumele ogqamile nombala ongathathi hlangothi. Kunconywa ukukhetha umbala oyinhloko wensimbi engenasici, umbala oyinhloko we-aluminium ingxubevange, ikhethini lemeshi yensimbi ekhanyayo noma i-spiral mesh yokuhlobisa. Umbala onokugqama okuphezulu ubukeka ugqamile futhi uhlanzekile. Uma ukufanisa umbala kungalungile, isikhala sizoba sibi. Ngakho-ke, abantu abavamile namanje abalokothi bazame imibala yomuntu siqu kakhulu. Okumhlophe kuphephe kakhulu. Okumnyama + okumhlophe kungakha umphumela oqinile wokubuka. Okumpunga kuphakathi kokumnyama nokumhlophe, okwenza kube lula ukungqubuzana okubonakalayo phakathi kwakho kokubili. Ukusebenza kulo mkhathi isikhathi eside kuzokwenza abasebenzi babe ne-Order enengqondo, uchwepheshe kanye nesibopho.